Leicester City oo ku guulaysatay Horyaalka Dalka England markii ugu horeysay Taariikhda – Bosaso Times News
Leicester City oo ku guulaysatay Horyaalka Dalka England markii ugu horeysay Taariikhda
admin May 3, 2016 Leicester City oo ku guulaysatay Horyaalka Dalka England markii ugu horeysay Taariikhda2016-05-03T14:58:21+00:00 No Comment
Kooxda Leicester City ayaa ku guulaysatay horyaalka kubada cagta ee dalka Ingiriiska markii ugu horeysay taariikhda. Waxaa la yaab ah in aan qofna filayn in kooxdan ay ku guulaysato koobka horyaalka kooxaha dalka Ingiriiska taas oo sababtu tahay kooxdan waxay ka badbaaday inay gasho horyaalka 2aad ee dalka ingiriiska sanadkii hore oo waxay ku bad baaday inay badisay 7 ciyaarood oo ugu danbeeyey horyaalka sanadkii hore.
Arintaan ayaa caalamka oo dhan laga hadal hayaa, waxaana layaab ah sida ay u qaateen horyaalka dalka Ingiriiska oo ah kuwa ugu caansan aduunka iyada oo ay joogaan kooxa waaweyn ee Manchaster United, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenhamp iwm.
Tababaraha kooxdan oo ah ninka u dhashay dalka Talyaaniga Claudio Ranieri ahna tababare aad looga yaqaan Europe iyo caalamka kooxa badana soo hogaamiyey ayaan marka ku guulaysan horyaalka wadamadii uu ka soo shaqeeyey sida kan Talyaaniga, Spain iyo wadamo kaleba ka hor tan uu hada qaaday ee kooxda Leicester oo aan cidna filayn.
Kooxdaan oo lagu magacaabo Foxes (Dawaco) ayaa la filayaa inay helaan lacag farabadan maadaama ay qaadeen horyaalka dalka Ingiriiska oo ah kan ugu qaalisan caalamka isla markaana ay ciyaari doonaan sanadka danbe horyaalka kooxa Yurub ee loo yaqaan Champions Leage.
Waa arin runtii muhiim ah kuna tusaysa in koox aan la filayn ay guul intaas leeg gaarto. Laacibiinta kooxdan waxaa ka mid ah Riyad Mahrez oo Aljeeriyaan iyo Jamy Vardy oo Ingiriis ah iyo laaciibiin kale oo aan hore sidaas caan u ahayn, waxayna dhigeen taariikh aan hore loo dhigeen, weligeedna kooxdani kuma guulaysan horyaalka 1aad ee dalka ingiriiska hada ka hor.
http://www.bosasotimes.com/leicester-city-oo-ku-guulaysata-horyaal-dalka-england-markii-ugu-horeysay-taariikhda/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2016/05/leicester-trophy-main.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2016/05/leicester-trophy-main-150x150.jpg 2016-05-03T14:58:21+00:00 adminsomali NewsSportsBosaso times,Leicester city Kooxda Leicester City ayaa ku guulaysatay horyaalka kubada cagta ee dalka Ingiriiska markii ugu horeysay taariikhda. Waxaa la yaab ah in aan qofna filayn in kooxdan ay ku guulaysato koobka horyaalka kooxaha dalka Ingiriiska taas oo sababtu tahay kooxdan waxay ka badbaaday inay gasho horyaalka 2aad ee dalka ingiriiska...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Bosaso times, Leicester city
« GABAR SOOMAALIYEED OO ISKU GUBTAY XERO QAXOOTI OO AY AUSTRALIA KU LEEDAHAY JAZIIRADA NAURU,
GALMUDUG IYO DDSI OO KA HESHIIYEY COLLAADII DEGAANKA DAAC-DHEER »